Papa M na Mama M Anaghị Ekweta Ihe M Gwara Ha | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Olee Ihe M Ga-eme Ka Papa M na Mama M Na-ekweta Ihe M Gwara Ha?
Chebaragodị ihe a echiche: Otú i si akpa àgwà ọ̀ na-eme ka papa gị na mama gị na-enyo gị enyo?
Dị ka ihe atụ, Pọl onyeozi dere, sị: “ Anyị na-achọ ka anyị na-eme ihe n’eziokwu n’ihe niile. ” (Ndị Hibru 13:18) Jụọ onwe gị ma ị̀ na-agwa papa gị na mama gị eziokwu mgbe ị na-agwa ha ebe ị chọrọ ịga na ihe ị chọrọ ime.
Select a name below for a true story.
“ O nwere mgbe m na-ezigara otu nwa okorobịa m hụrụ n’anya ozi iimel na nzuzo. Papa m na mama m mechara chọpụta ma sị m kwụsị ya. Agwara m ha na m ga-akwụsị ya, ma akwụsịghị m. M nọ na-ezigara ya ozi ruo otu afọ. Ọ na-abụ m zigara nwa okorobịa ahụ ozi iimel, papa m na mama m chọpụta, mụ arịọ ha ma gwa ha na agaghị m eme ya ọzọ. E mechaakwa, mụ emee ya ọzọ. O nwere ebe o ruru, ha anaghịzi ekweta ihe ọ bụla m gwara ha! ”
Olee ihe i chere mere papa na mama Lori ji gharazie ikweta ihe ọ bụla ọ gwara ha?
Ọ bụrụ na ị bụ papa ma ọ bụ mama Lori, olee ihe ị gaara eme? Oleekwa ihe mere ị ga-eji mee ya?
Mgbe mbụ ahụ papa na mama Lori gwara ya ka ọ kwụsị izigara onye ahụ ozi iimel, olee ihe ọ gaara eme iji gosi na ọ bụ ezigbo nwa?
“ “O nwere mgbe papa m na mama m na-anaghị ekweta na m naghị achụ nwoke. Ma, aghọtala m ihe kpatara ya. N’oge ahụ, mụ na ụmụ nwoke abụọ ndị ji afọ abụọ tọọ m na-eme enyi. Mụ na ha na-ekwu okwu ọtụtụ awa n’ekwentị. Anyị gaa oriri na nkwari, ọ na-abụkarị naanị mụ na ha na-akpa nkata. Ndị mụrụ m naara m ekwentị m ma jide ya ruo otu ọnwa. Ha ekweghịkwa m gaa ebe ọ bụla mụ na ụmụ okorobịa ahụ ga-ahụ. ”
Ọ bụrụ na ị bụ papa ma ọ bụ mama Beverly, olee ihe ị gaara eme? Oleekwa ihe mere ị ga-eji mee ya?
Ì chere na ihe ahụ papa na mama Beverly mere ya adịghị mma? Ọ bụrụ na i chere otú ahụ, olee ihe mere i ji chee otú ahụ?
Olee ihe Beverly gaara eme ka papa ya na mama ya na-ekweta ihe o kwuru?
Ihe Ị Ga-eme Ka Papa Gị na Mama Gị Kwetawa Ihe I kwuru
E nwere ike iji ugbu a ị na-eto eto tụnyere ebe i ji nwayọọ nwayọọ na-arị steepụ ụlọ elu. Nwayọọ nwayọọ ka ị ga-ejikwa ghọọ onye torola eto na-akpa ezigbo àgwà
Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụta ebe ị na-anaghị eme nke ọma n’ihe ndị a:
Ịlọta mgbe a gwara m lọta
Ime ihe m kwuru
Ịga ihe n’oge
Iji ego m eme ihe bara uru
Ịrụcha ọrụ e nyere m n’ụlọ
Iteta n’ụra n’echeghị ka mmadụ kpọtee m
Idebe ime ụlọ m ọcha
Iji ekwentị ma ọ bụ kọmputa eme ihe bara uru
Ikweta ihe m mejọrọ na ịrịọ mgbaghara
Ihe nke abụọ ị ga-eme bụ ikpebisi ike na ị ga na-eme nke ọma n’ebe ndị ahụ ị na-anaghị eme nke ọma. Mee ihe a Baịbụl kwuru: ‘ Yipụ mmadụ ochie ahụ, nke kwekọrọ n’ụzọ i si eme omume n’oge gara aga. ’ (Ndị Efesọs 4:22) Ka oge na-aga, papa gị na mama gị na ndị ọzọ ga-achọpụta na ịna-emezi nke ọma.—1 Timoti 4:15.
Ihe nke atọ ị ga-eme bụ ịgwa papa gị na mama gị ebe ndị ahụ i kpebirila na ị ga na-eme nke ọma. Kama ịnọ na-ekwu na papa gị na mama gị kwesịrị ikweta ihe ndị ị na-agwa ha, jiri nwayọo jụọ ha ihe ị ga na-eme ka ha ghara ịna-enyo gị enyo.
Ihe ị ga-akpachara anya maka ya: Echekwala na ị gwachaa papa gị na mama gị ihe a, ha ekweta ozugbo. Ha ga-achọgodị ịma ma ị̀ ga-emekwa ihe i kwuru. Ọ bụ ugbu a ka i kwesịrị ibido mewe ihe ndị ahụ i kwuru. Ka oge na-aga, papa gị na mama gị nwere ike kwetawa ihe ị na-agwa ha, ha ga na-ahapụkwu gị ka i jiri aka gị na-ekpebi ihe ị ga-eme. Papa na mama Beverly meere ya otú ahụ. Beverly sịrị: “Ọ dịghị mfe ime ihe ga-eme ka papa gị na mama gị na-ekweta ihe ị gwara ha, ma ọ dị mfe ime ihe ga-eme ka ha na-enyo gị enyo.” O kwukwara, sị: “Otú m si akpa àgwà ugbu a emeela ka papa m na mama m na-ekweta ihe m gwara ha. Obi na-atọkwa m ụtọ!”
Ihe dị mkpa i kwesịrị ime: Ị na-eme nke ọma, papa gị na mama gị agaghịzi na-enyo gị enyo.